धान दिवशमा मात्र होइन्, धानको व्यवसायिक उत्पादनमा कम्मर कसेर लाग्नु आवश्यक छ’ - साँचो खबर Online Khabar
धान दिवशमा मात्र होइन्, धानको व्यवसायिक उत्पादनमा कम्मर कसेर लाग्नु आवश्यक छ’
२०७८ अषाढ १४, सोमबार (१ महिना अघि)
कृषि मुलश्च जीबनम्” यो साश्वत सत्य कुरा हो । मानिस भोकभोकै धेरै दिन वाँच्न सक्दैन । केही दिन वाँचे पनि कर्म गर्न सक्दैन् । अर्कोतर्फ प्रकृतिमा उपलब्ध कन्दमुलले यति धेरै मानब समुदायको भोक तृप्ती गर्न सक्दैन । राजा देखि रंकसम्मको भोक भेटाउन कृषि उपज नै चाहिन्छ ।
यसैले कृषि उपजको महत्व मानव जीवनमा अक्सिजनयुक्त स्वास जत्तिकै छ । अर्थात, कृषि उपज बिना मानव जीउनु असम्भव प्रायः हुन्छ । यसका अलावा कृषि उपज उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारीको आधारशिला पनि हो । यसैले कृषि क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन र समष्ठिगत समृद्धिको कुञ्जी पनि हो ।
१. कस्तो राय व्यक्त गर्दछन विद्धानहरु कृषि उपज सन्दर्भमा ?
आर्थिक उत्प्रेरणाको लागि सबैभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने अन्य विकासवादी अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ । लुईस, हुवर, वाईनर, किन्डलबर्जर जस्ता अर्थशास्त्रीहरुले न्यून आय भएका मुलुकहरुले कृषि क्षेत्रलाई अग्रपंक्तिमा राख्नु पर्ने मत राख्दछन्् । त्यस्तै प्रो. रोष्टोब कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिक बिकासको आधारशिला ठान्दछन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको सन्तुलित बिकास, भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रास्फिर्ती नियन्त्रणका निमित्त कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने सयुंक्त राष्ट्र संघको ठम्याई छ । कृषि क्षेत्रको सबलीकरण बिना उत्पादनशील उद्योग दिगो बन्न नसक्ने ए.एच. मिट दाबा गर्दछन्। कृषि र औद्योगिक क्षेत्र बीच वान्छित सन्तुलन बिना दीर्घकालनीन बिकास अशंभब हुने प्रो. पि.काँगचागको जिकिर गरेका छन् । अल्पबिकसित मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभई आर्थिक बिकासको गोरेटोमा डोरिन सक्दैन भन्ने प्रो. शुल्टनको मत रहेको छ ।
२. के–कस्तो रहेको छ नेपालमा कृषि क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था ?
नेपालमा पहिलो पटक वि.स. २०२१ मा भूमि सुधार ऐन ल्याइएकोमा वि.स. २०२४ मा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । कृषि क्षेत्रमा आँठांै योजनाकाल देखि दीर्घकालीन अवधारणामा अगाडि सारियो । ठेट रुपमा वि.स. २०५२ देखि दीर्घकालीन कृषि नीति लागू गरिएको थियो ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ २०१५ देखि २०३५ को अवधिका लागि २० बर्षे कृषि रणनीति अगाडि सारिएको थियो । राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यापार प्रबद्र्धन नीति २०६३, कृषि जैबिक बिबिधता नीति २०६३, पशुपालन नीति २०६८, राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९, सिँचाई नीति २०७०, कृषि यान्त्रीकरण प्रबद्र्धन नीति २०७१ अघि सारिएको छ ।
मुलुकले राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ मा वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणाली लागू गरिने, ४ हेक्टर भन्दा कम जमिने हुने किसानहरुको वर्गीकरण गरी तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराईने, भूमि बैंक स्थापना गरिने, चक्लाबन्दी खेती गरिने, आधा हेक्टर भन्दा कम जमिन भएका दलित उत्पीडित किसानहरुलाई बिशेष सुविधा उपलब्ध गराईने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ मा रासायिनक मल कारखाना स्थापना गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, मलको मूल्य बजार प्रतिस्पर्धा आधारमा निर्धारण गरिने, मलमा कुनै किसिमको अनुदान नदिइने, उच्च पहाडी जिल्लामा सिमान्त किसानलाई बिशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्र्तगत मात्र अनुदान दिन सकिने कुरा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय भू–उपोग नीति, २०६९ मा उच्च पहाडमा मूल्यवान जडिबुटी, फलफुल, तथा पशुपालन, हिमालमा जडिबुटी, खानी तथा प्रर्यटन, तराईमा अन्नवाली प्रबद्र्धन गर्ने नीति तय गरेको छ । मनासिब कारण बिना ३ वर्षसम्म जमिन बाँझो राखेमा सार्बजनिक हितमा जमिन उपयोग गर्न सकिने, कृषि भूमिको गैर–कृषि क्षेत्रमा उपयोग निरुत्साहित गरिने, स–साना जमिन खण्डिकरण गर्न नपाईने प्राबधान छ ।
कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन नीति, २०६३ मा व्यवसयिक वाली, प्रांगारिक वाली, निकासीमूलक बाली, करार खेती थे्रसर, स्रिपिङ कुलर, बिडिङ मेसिङ, चिलिङ भ्यान, कुलिङ भ्याट, मिल्क प्रोसेशर आयातमा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट दिने उल्लेख छ । भलै प्रस्तुत नीतिहरुको के—कति लागू हुन सकेको छ भन्ने बेग्लै समीक्षाको बिषय हुन सक्छ ।
३. के–कस्तो छ नेपालको प्रधान वाली अर्थात धानको स्थिति
नेपालमा धान, मकै, गहु, कोदा, फावर, जौँलगायत खाद्य वाली कहलिन्छन । जहाँसम्म धानको उत्पत्तिको सवाल छ, करिब ५,००० वर्ष पहिले धानको उत्पत्ति भएको अनुमान गरिएको छ । प्रकृतिका हिसाबले धान घाँसे परिवारअन्तर्गतको एकवर्षीय वनस्पति हो । जसका लागि करिब १०० सेन्टीमिटरसम्म बर्षा आवश्यक पर्दछ । यो मुलतः उष्ण प्रदेशीय वाली हो ।
धान, मकै, जौं, गहु, कोदा, उवा फावर जस्ता खाद्यवाली मध्य धानको स्थान अग्रपंक्तिमा छ । त्यसैल यो हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली हो । अहिले पनि आम नेपालीको बिहान बेलुकाको खानेकुरा भनेकै भात भन्ने बुझिन्छ । त्यसो त ४ दशक पहिले नेपालका अधिकाशं पहाडी जिल्लामा सडक पुगेका थिएनन् । सडक नपुग्दा तराई वा भारतको चालम पुग्ने कुरै थिएन ।
धान उब्जाउ जमिन आधा मानिसको पोल्टामा मात्र हुँदा कुनै गरिबका घरमा भात सायदै पाक्दथ्यो । मकै तथा जौंको आटो(ढिडो), गहुँ तथा कोदाको रोटी खाइन्थ्यो । अर्थात, दशैँ तिहासमा मात्र जुटाएर भात खाईन्थ्यो । तर अहिले ती दिन पूर्णतया बदलिएको छ । ज्याला मजदुरी गर्नेले समेत तराईको भात खाने गरेका छन् । अहिले गाँउ घरका चुल्हाचौकाको आटो वा मकैको रोटीलाई भातले पूर्णतया बिस्थापित गरिसकेको छ । अझ भन्नुपर्दा आम नेपालीको लागि र्निबिकल्प जस्तै भएको छ ।
४. के–कस्तो छ, नेपालमा धान उत्पादनको अवस्था ?
उत्पादन तथा खपतको हिसाबले विश्वको कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत एशियामा हुने गरेको छ । जहाँ चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यान्मार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान संसारकै १० प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् । जहाँ नेपाल १७ औं स्थानमा पर्दछ ।
कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन । धानको उत्पादन क्षेत्रफलका हिसाबले २०७६/७७ मा खेती योग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये लगभग आधा अर्थात १४ लाख ५८ हजार हेक्टरमा धान खेती भएको थियो । त्यस्तै २०७८।७९ मा ४८ हजार हेक्टर बढी जमिनमा धान खेती गरिएको छ । जहाँ २०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । कुल अन्नबालीको ५२ प्रतिशत हिस्सा हो ।
त्यस्तै, आव २०७६।७७ मा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्नेमा प्रदेश १, २ र ५ अग्रस्थाना छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा १४ लाख २० हजार चार सय ३६ टन, प्रदेश १ मा १२ लाख ४५ हजार पाँच सय ४५ र प्रदेश ५ मा ११ लाख ८५ हजार चार सय ९३ टन धान उत्पादन भएको आँकडा छ । सबैभन्दा कम कर्णालीले एक लाख ३४ हजार चार सय सात टन धान उत्पादन भएको छ । जिल्लागत उत्पादनको आधारमा झापा, मोरङ, कैलाली, रूपन्देही र कपिलवस्तु पाँच शीर्ष स्थानमा छन् ।
नेपालमा वार्षिक रुपमा चामलको माग यत्तिनै रहन्छ भन्ने तथ्यांक यकिन नभए पनि करिब ६२ लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये ५६ लाख मेट्रिक टन उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ भने ६ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन अपुग रहेको कृषि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । माग अनुसारको उत्पादन नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा धान तथा चामल गरी ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैँयाको आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको आँकडा छ ।
५. अर्थतन्त्रमा धानको के–कस्तो रहेको छ स्थान ?
सबभन्दा महत्वपूर्ण धानको नेपाली अर्थतन्त्रमा विशेष स्थान छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २०७७।७८ मा २५.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । जुन २०६८।६९ मा ३२.७ प्रतशत रहेको छ । यसको अर्थ कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश घटनै गएको छ भन्ने नै हो ।
धानको हिस्सा कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औषत ५ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ अर्थ के हो भने धानको उत्पादनमा हुने घटबढको असर समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्दछ ।
६. के–कस्ता छन, धानवालीका सबल पक्षहरु
नेपालमा मनाङ र मुस्ताङबाहेकबाहेक सबै जिल्लाहरुमा धान खेती हुने गर्दछ । उचाईका हिसाबले समुद्र सतहभन्दा ६० मिटर (झापा) माथिदेखि ३,०५० मिटर (जुम्ला) सम्म उत्पादन हुने गरेको छ । भौगोलिक हिसाबले उच्च पहाडी क्षेत्रमा करिब ५ प्रतिशत, मध्यपहाडमा २५ प्रतिशत र तराईमा ७० प्रतिशत धानको उत्पादन हुन्छ । जहाँ नेपाल अहिले पनि विश्वमा धेरै धान उत्पादन गर्ने २० देशभित्र पर्दछ ।
तुजुकको कुरा चाहिँ जुम्लाको छुमचौर संसारकै अग्लो स्थान धान उत्पादन हुने स्थान कहलिन्छ । जुन जुम्ली मार्सीको नामवाट जनज्रिब्रोमा झुन्डिने समेत गरेको छ । अर्को तुजुकको कुरा भनेको प्राकृतिक रूपमा नेपालमा बर्षैभर धान खेती गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस, नेपालमा खेती गरिने जमिनको करिब ४७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ ।
(ख) समर्थन मूल्य
सकारात्मक पक्ष भनेको सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । जहाँ मोटा धानको सर्मधन मूल्य २०७५।७६ मा प्रतिक्यूटनले २ हजार ३ सय ३१ रहेकोमा २०७६।७७ मा २ हजार ५ सय ३२ हँुदै २०७८।७९ मा २ हजार ७ सय ३५ पुराईएको छ । समर्थमन मूल्य तोकिनु भनेको धानको न्युनतम प्रतिफल सुनिश्चय हुनु हो । अपितु, सरकारले मूल्य तोक्ने अनि व्यापारीले सस्तोमा धान बेच्न कृषकलाई बाध्य पारिएमा भने त्यो दुर्भाग्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
(ग) कृषि बीमा
सरकारले बाली बिमा लाग्ने प्रिमियको ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । धान खेतीमा पनि लागू हुने हुँदा कृषि बिमा पनि धान उत्पादन गर्ने कृर्षकका लागि अर्को सुरक्षा कवज मान्नुपर्दछ । भलै, यो सीमा तथा व्यापकता अझ विस्तार गर्नु आबश्यक नरहेको भने होईन
(घ) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामाअन्र्तगत धानवालीलाई विशेष महत्व दिइएको छ । जहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झपामा १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपरजोन घोषण गरिएको छ । उक्त परियोजना धान वालीको लागि लाभग्राही नभई रहँदैन ।
७. के–कस्ता छन दुर्बल पक्षहरु ?
(क) न्युन उत्पादन वृद्धि
धान उत्पादनमा नेपाल वास्तवमै चुकेको छ । उक्त कुरा नियाल्न विगतका आँकडा नियाल्नु आवश्यक हुन्छ । सन् १९६१ मा भारतले ७ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन धान चामल आयात गर्दा नेपालले २ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो । त्यस्तै १९८५ मा नेपालले १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ५९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो ।
परन्तु, १९९० ताका आईपुग्दा नेपाल निर्यात देशबाट आयातकर्ता बन्न पुग्यो । जहाँ, सन् २०१५ मा आईपुग्दा भारतले ६ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको १ करोड ९ लाख मेट्रिक टन चामल निर्यात गर्दा नेपालले २१ करोड ५४ लाख डलर बराबरको ५ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन धान चामल आयात गरेको थियो । सन् १९६५ ताका धान निर्यात गर्ने मुलुकमा पाँचौ स्थानमा रहेको अहिले बर्षेनी ३०–३५ अर्बको धान चामल आयात कम्ती सोचनीय कुरा होईन ।
(ख) रासायनिक मलको अभाव
खेतीपाती गर्नुपर्ने बेला देशैभर किसानहरू मलको खोजीमा दौडनुपर्ने बाध्यता सधै भेल्नु परिरहेको छ । धानका लागि आवश्यक पर्ने युरिया, डिएपी तथा पोटास आबश्यकता अनुरुप कृर्षकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसपाली पनि किसानले युरिया लगायत रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपर्यो । मल अभावको समस्या किसानले बर्षौदेखि भोग्दै आएका छन ।
(ग) सिँचाई सुविधा अभाव
अर्थतन्त्रको यति धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदाहुँदै पनि धान उत्पादनको लागि नेपाल अझै पनि आकाशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ, कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये मुस्किलले २० प्रतिशत जतिमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ भने बाँकीमा भूमि आकाशकै भर पर्नु परेको छ । धान उत्पादन बढाउन मनसुनी वर्षा मात्र पर्याप्त नहुने धानविज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेत बताउछन । भलै यसपाली असारको आधा आधीसम्ममा नेपालले यथेष्ट मात्रमा बर्षा भईसकेको छ ।
(घ) रोग किराको प्रकोप
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयल सहसचिव हरिबहादुर केसीका अनुसार तराईमा किराको प्रकोप अलि बढी देखिएकाले छ । जसले उत्पादकत्व घट्छ कि भन्ने चिन्ता गरिएको छ । यसो त तराईका केही जिल्लामा धान लगाएको केही समयदेखि नै विभिन्न प्रकारका किराले दुःख दिँदै आएको छ । प्रदेश १ मा रोगकिराले सताएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताउँछन् ।
(ङ) न्युन उत्पादकत्व
नेपालमा धानको औसत उत्पादकत्व विश्वमै निकै कम रहको छ । जुन ३.५ टन प्रतिहेक्टर मात्र हो । जबकी प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व चीनमा ७.० टन बंगलादेशको ४.७ टन प भुटानमा ४.३ टन, भारतको ३.९ टन, पाकिस्तान तथा श्रीलंमा ३.८ टन रहेको छ । मलखादको सदावाहर संकट, सिँचाई सुविधाको अभाव, आधुनिक प्रविधिको अभावका कारण उत्पादकत्व कम हुनुका मुख्य कारणहरु हुन् ।
स्मरण रहोस, आ.व.२०७७।७८ मा धान लगाइएको क्षेत्रफल १ प्रतिशतले र धानको उत्पादमा १.१८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । जबकी २०७६।७७ मा धान लगाइएको क्षेत्रफलमा २.२ ले हस आएको थियो भने उत्पादकत्व १.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो (आर्थिक सर्बेक्षण २०७७।७८)
८. चाल्नु पर्ने कदम
धान बालीको विशिष्टीकरण गरी उन्नतिको मार्गमा हिडेका मुलुकहरुवाट पाठ लिने स्थान पर्याप्त छ । श्रीलंकाले चियामा, मलेसियाले रबर, नरिवल, इन्डोनेशिया खजुर, बंगालादेशले सनपाट र पाकिस्तानले कपासमा विशिष्टीकरण गरको छन् ।
(क) सिंचार्ई आयोजना
सिंचाई सुविधा बिना धान उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि असम्भव हुन्छ । कृषि उत्पादको लागि ठूला सिंचार्ई आयोजना आवश्यक पर्छ । सोही अनुरुप सिक्टा, कुलरिया जमुनिया, भेरीबबई डाभईसन जस्ता ठूला आयोजनाहरु राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा अगाडि सारिएका छन । ती ठूला सिँचाई आयोजना भरसक छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसर्थ यी लगायत साना तथा मझौला सिचाई र लिफ्ट सिंचाईमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्र जबसम्म यान्त्रीकरण गर्न सकिदैन, तबसम्म क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । कृषि क्षेत्र यान्त्रीकरण हुनु भनेको दर्जनौ मानिसले घण्टौ लगाएर गर्न नसक्ने कार्य क्षणभरमा फत्ते गर्नु हो । यसर्थ धानवालीका लागि भूमि तयारी फसल गर्न, वीउ राख्न, गोडमेल गर्न, बटुल्न, प्याकेजिङ गर्न, गे्रडिङ गर्न समेत प्रविधिको उपयोग गर्नु खाँचो छ ।
(ग) उन्नत बीउ
उन्नत बीऊवाट ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन बृद्धि हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । कुनै निश्चित बीउ लामो सयमसम्म प्रयोग गर्दा उत्पादकत्वमा बिस्तारै हस आउँछ भने अर्कोतर्पm हाईब्रीड बीउको प्रयोग गर्दा उत्पादन तीन गुणासम्म बृद्धि हुन सक्छ । यसर्थ धानबालीका लागि उन्नत बिऊमा बढावा दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, विज्ञहरूका भनाइमा पुरानो बीउको उत्पादकत्व कम हुने हँुदा हरेक वर्ष वा २–३ वर्षमा परिवर्तन गर्नु वान्छनीय हुन्छ ।
(घ) कृषि बजेट वृद्धि
आ.व. २०७२।७३ मा २७ अर्ब र २०७३।७४ मा ३६.०८ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएकोमा आ.व. २०७८।७९ कृषि तथा पशुपंक्षी विकासतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन, ०७८।७९ मा कूल विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्बको कृषि बजेटको हिस्सा २.७४ प्रतिशत मात्र हो ।
यसर्थ, कृषि क्षेत्र नउठुन्जेलसम्म धानबालीलाई विशेष महत्व दिई कूल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत विनियोजन गर्न कन्जुस्याँयी गर्नुहुदैन ।
(ङ) रासायनिक मल
मुलकमा अहिले बर्षेनी ११÷१२ अर्बको रासायनिक मल भारत, चीन, बंगालादेशवाट आयात भईरहेका छ । जहाँ युरिया मात्र वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन आवस्यक पर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ कृषकले चाहेको बखतमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनीबाट वितरित मल प्राप्त गर्न नसक्दा कृषकले महंगो मूल्यमा समेत खरिद गर्नु परिरहेको छ ।
आयातित मल स्वभाविक रुपमै महंगो पर्ने हुँदा सधै आयात गर्नु भन्दा मल कारखाना स्थापना गर्न आँट गर्नुपर्छ । यसको अवाला नेपालमा प्रांगारिक मल रासायिनक मलको राम्रो बिकल्प भएकाले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्नु आवस्यक छ ।
(च) किसानको हित
किसानको हित र अधिकार नउठाइ कृषि उठ्न सक्दैन । तर, नेपालमा कृषकका अवस्था उठान हुनेगरि सर्बसुलभब ऋण, कृषि वस्तु उतपादन तथा निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिएको छैन् । त्यसमाथि कृषक बिचौलियाको चंगुलमा पर्न बाध्य छन् । यसर्थ कृर्षकलाई बढिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुको साथै कृषि कर्जामा डुबेका कृषकलाई कृषि ऋण मिनाहा र बिचौलिया नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।
कृषि तथा पशु बिमामा ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमीयममा अनुदान दिईएको छ । धानबालीको हकमा आत्मनिर्भर नहुन्जेलसम्म पहँचु विस्तारसहित बिमामा ९० प्रतिशत सम्म पु–याउदा कृषक बढि लाभान्वित हुन सक्दछन् ।
त्यस्तै, आयातित चामल नेपालको तुलनामा सस्तो पर्ने गरेकाले कृषि वस्तुमा लगाउँदै गरिएको ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क १५ प्रतिशत सम्म पु–याउनु आवश्यक छ ।
सारांशमा, असार १५ गते धान दिवस मनाइरहँदा मन्त्री, नेताहरु हिलो धानमा लडिबुडी गर्ने, कतिपय मनोरञ्जन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा तस्बीरहरु भाईरल गराउनुभन्दा नीतिगत कमजोरीहरु औल्याई उपलब्ध जमिन, कृषि प्रविधि र युवा शक्तिलाई यसतर्फ आकर्षित गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक ढुन बहादुर बुढाथोकी, “संघर्ष” स्वतन्त्र पत्रकार हुन्)
देखिएनन् खेतमा हलो-जुवा र गोरु, सुनिएन कतै असारे गीत
किसान को लागि 50% हाते ट्याक्टर अनुदान दिने सरकार को तयारि
तरकारी बजार भित्रिने सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू